China Kwakavharwa nenyama bhendi revatema Anoumba ndege chifukidzo muchina ndege ndege kuraswa kwakavharwa nenyama nzeve bhendi mask machining fekitari uye vagadziri Kunyengera
Kwakavharwa nenyama nzeve bhendi revatema Anoumba ndege chifukidzo muchina ndege ndege kuraswa kwakavharwa nenyama nzeve bhendi chifukidzo machine
Iyo yakasununguka ndege muchina inokodzera otomatiki kugadzirwa kwendege mask Iyo yekugadzira tambo yeelastic nzeve tambo ndege mask mask muchina unonyanya kushandiswa kugadzira otomatiki kugadzirwa kwendege mask. Inonyanya kusanganisira rwakapetwa rwese rwejira mushure mekusunungura, kuputira kumucheto, kumhanyisa mhino yekushandisa, kupeta, nzeve bhandi kucheka uye kusanganisa, uye kupedzisa kucheka kwechigadzirwa. Iyo yakagadziriswa maski inoburitswa neanotakura chikuva. Iyo jira rakasununguka rinoshandiswa senge yakasvibirira yeiyo nzeve bhendi, inozvigadzira uye yakasanganiswa nemuviri, kuti ivandudze hunhu hwemaski. Yakashongedzerwa neiyo ultrasonic wave, inogona kushandisa ipapo ipapo wave kuti iweld, kutema kana kudhindisa zvinhu nekukurumidza, PLC kutonga, kugadzikana kuita, yakapusa uye yekuchengetedza-basa oparesheni, yakakwira kugadzirwa kwekuita.
Iyo yekugadzira tambo yeelastic nzeve tambo ndege chifukidzo muchina kunyanya unosanganisira coil kudyisa, kupeta uye kudzvanya, yemhino bhiriji clip kudyisa uye mask kugadzira. Mask yekucheka tekinoroji. Nekushandisa ultrasonic wave, izvo zvinhu zvinogona kukurumidza kusunganidzwa, kucheka kana kuvezwa neapapo ipapo wave, iyo yakagadzikana, yekuchengetedza-basa uye kugona kwakanyanya.
Kwakavharwa nenyama nzeve bhendi chifukidzo muchina muchina chinhu otomatiki michina, inova matatu-mativi eiyasi yekugadzira michina ine firita jira rukoko. Kubva pane mbishi yekupa chikafu kusvika pakupedzisa chigadzirwa kugadzirwa mutsara we otomatiki mashandiro. Elastic jira rinoshandiswa senge mbishi zvinhu zvebhandi renzeve, iro rinongosanganiswa nemuviri.
--- Mushini wese kubva kuchinhu chepakati chekudyisa, mhino danda mutsetse kuisa, kumucheto chisimbiso, kucheka, zvese zvinopedzwa otomatiki.
--- Yakasarudzika yakakwenenzverwa emhando yepamusoro, matatu matatu.
--- Modular dhizaini, yakachengeteka uye yakapusa mashandiro, nyore kugadzirisa, otomatiki shutdown alarm.
-Muchina wese unotora aruminiyamu chiwanikwa chimiro, mhando yepamusoro yezvinhu, yakatsiga uye yakavimbika michina, chiratidzo chengura uye nyore kuchenesa.
--- Mushini unobatana, mudiki muhukuru uye hautore nzvimbo.
--- PLC chirongwa chekudzora, yakadzikama kugadzikana, yakaderera kutadza chiyero.
Chigadzirwa zita nhete nzeve tambo ndege chifukidzo muchina
Zvishandiso 3600 * 900 * 1900mm
Zvishandiso modhi sy-200t
Kushanda simba kugovera w 220 V / 50 Hz
Kumanikidzwa kwemhepo 0.5-0.6MPa
Production kunyatsoshanda 150-200pcs / min
Equipment simba 3kw
Pashure: Mukombe mhando, mukombe mhando semi-otomatiki maski muchina, semi-otomatiki mukombe mhando maski muchina
Zvadaro: Otomatiki kumhanya mhino yekudhinda yekupeta maski muchina
Mask Mugadziri, Kavha Bubble Bhegi, Mutsvuku Wekutsvuka, Anti Static Bubble Mucheka, Imwe Dhonza Imwe Mask Machine, Chiso Mask Machine,